Global Voices teny Malagasy » Kazakhstana: Ny Maha-Hafahafa Ny Ankehitriny Nomerika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Marsa 2018 2:28 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika Vero
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
Kanefa, tsy very fanantenana ireo mpankafy ary miezaka ny mitondra tetikasa vaovao, raha ireo manmpahefana kosa indray miezaka mampiasa azy ireo hanondrotana ny fijerin'izao tontolo izao an'iy Kazakhstana. Noho izany, ohatra , no nitateran’  i Lena B-va ao amin'ny neweurasia fa misy tetikasa manana ho avy – Second Astana  – mety ho dingana mankany amin'ny fanandratana manerana izao tontolo izao ny marika atao hoe “Repoblikan'i Kazakhstana” :
Mihamahazo laza koa ny tsena eo amin'ny aterineto ao amin'ny firenena noho ny vidiny mora – manana tsena eo amin'ny Aterineto izao ny ankamaroan'ireo mpivarotra antsinjarany malaza mpanome kojakojan-tokantrano sy elektronika. Ankoatr'izay, mampitodika ny fandraharahàny ho any amin'ireo mpiasa vahiny sy mpanjifa vahiny ny sasany amin'izy ireo. Manoro ny tranonkalan'ny Art Of Central Asia- Asa tanan'i Asia Afovoany  i Syedin, bilaogera sy mpamoaka lahatsoratra ao aminà gazety iray amin'ny taratasy malama, ho an'ireo mpankafy asatanana ara-poko [ros].
Maka ny saina sy ny fotoanan'ireo olona manerana ny CIS ny tambajotra sosialy – hamoaka ny karazany voafaritra ao Okraina sy Kazakhstana ny loharano Rosiana malaza be antsoina hoe Odnoklassniki  (mitovy dika amin'ny mpiaramianatra ), manoratra utkir-aka [ros]. Tsy nanilika ny famoronana ny karazana amin'ny teny Kazakh sy Okraina ny tompon'ilay tolotra sosialy.
Kanefa, tsy mangirana sy falifaly daholo ny zavatra eto. Ohatra, notsenaina tamin'ny mahatsikaiky sy fahasanganehana ny vaovao momba ny famoahanana ny rakibolana amin'ny voambolana elektronika amin'ny fiteny telo. Notohanan'ny Akademian'ny Cisco sy ny gazetiboky Digital Kazakhstan ny boky amin'ny teny Rosiana, Kazakha sy Anglisy. Naneho ny heviny  i Habrahabr [ros]:
Be kiana  i Master-mahno, manam-pahaizana fantan-daza amin'ny informatika , manoloana ny baikon'ny praiminisitra mba “hanamoràna ny fanekena ny Fotokevitry ny Fanjakàna momba ny Fampivoarana ny sehatrin'ny Aterineto ao Kazakhstan” [ros]:
Noho izany, nihitatra tsy eo amin'ny sehatry ny angovo ihany, fa eo amin'ny aterineto koa ny fepetra ara-pitantanana amin'ny fomba sovietika sy ny fandrindràn'ny fanjakàna. Amin'io fotoana io ihany, be teny soa  manoloana ny tontolon'ny bilaogy Kazakhstana i tuganbaev, olona manan-danja ao amin'ny tontolon'ny bilaogy ao Rosia, mpamokatra tetikasa maro ao amin'ny aterineto ary teratany Kazakha:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/02/115817/
 Art Of Central Asia- Asa tanan'i Asia Afovoany: http://www.artofcentralasia.com/
 manoratra : http://utkir-aka.livejournal.com/158011.html
 Naneho ny heviny: http://habrahabr.ru/blog/i_am_clever/37160.html
 Be kiana: http://mactep-maxho.livejournal.com/31896.html
 be teny soa: http://tuganbaev.livejournal.com/1415543.html